“Waanu ku faraxsanahayin 30% baarlamaanka Soomaliya inaan ku yeelano” Maryan Guduudo. – Radio Daljir
“Waanu ku faraxsanahayin 30% baarlamaanka Soomaliya inaan ku yeelano” Maryan Guduudo.
Bosaso,Feb 19 -Ururrada bulshada rayidka ee Puntland ayaa soo dhoweeyay qodobadii kasoo baxay shirkii magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland uga socday madaxda dowladda faderaalka Soomaaliya, maamulada Puntland, Galmudug iyo Ahlu-Sunah Waljameeca.
Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Bari Maryan Guduudo oo waraysi uu la yeeshay Radio Daljir ayaa waxaa ay sheegtay inay siweyn ugu qanacsanyihiin una soo dhoweynayaan go’aamadii kasoo baxay shirkii Garoowe 2.
Waxaa ay sheegtay go’aamada shirka inay ka mid ahayd 30% tirada baarlamaanka Soomaaliya inay noqdaan haween,taasina ay tahay mid ay soo dhoweeynayaan.
“Waxaanu u aragnaa arin fiican waan filaynay, waanu ku faraxsanahay weliba waxaanu jecelnahay intaasi looga sii dhowaado 40% hadaan waynay intaasi waanu ku qanasacanahay bacdamaa aan horay u lahaan jirin ,iyadoo tixgelintaasi aanu heli jirin”ayay tiri Maryan Guduudo gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Bari.
Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Bari ayaa dhanka kale sheegtay haweenka Puntland inay xiligaan u tartamayaan doorashooyinka soo socda iyo inay xubno ku yeeshaan axsaabta Puntland laga hirgalin doono mustaqbalka dhow.